Cash, Inc. Money Clicker Game & Business Adventure 2.3.5.1.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.3.5.1.0 လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား သြင္တူျပဳျခင္း Cash, Inc. Money Clicker Game & Business Adventure
Cash, Inc. Money Clicker Game & Business Adventure ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ငွေ, Inc နှင့်အတူတသက်တာ၏အဆုံးစွန်ပျင်းရိ clicker စွန့်စားမှုအပေါ်စတင်! သင်တစ်ဦးအချိန်ကာလယန္တရားတည်ဆောက်အပေါင်းတို့နှင့်အချိန် (စာသား!) ၏လူကြိုက်အများဆုံးပိုက်ဆံသူဌေးကြီးနိုင်ပါတယ်။ စည်းစိမ်ကိုလှိမ့စတင်သည်နှင့်တပြိုင်နက်, အဘယ်သူမျှသင်တို့ကိုသွားပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုဝေးဟုအဲဒီမှာပဲ!
ဒီအနှိပ်ဂိမ်းသူဌေးက, သင်တို့အဘို့ဖန်ဆင်းခဲ့သည်! ရုံခဏနှိပ်ပါထိပုတ်ပါ။ ထို့နောက်သူတို့သည်သင်၏နေရာအရပ်၌သင်တို့၏စည်းစိမ်ဥစ္စာစုဆောင်းပါလိမ့်မယ်အဖြစ်အံ့သြဖွယ်စူပါစတား, လာမယ့်အဆင့်အထိသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဂိမ်းကိုယူပါစေ! သင်သည်သင်၏စည်းစိမ်ဥစ္စာအားလုံးခေတ်ထဲမှာကြီးထွားမြင်သည်အတိုင်းတစ်ဦးကငွေ-crazed စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသူဌေးကြီးဖြစ်လာ။
သငျသညျ, အဘို့သူဌေးကအဘယ်အရာကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြသနည်း အပေါ် Hop မှာခုန်နှင့်အချိန်မှတဆင့် prance နှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအင်ပါယာကြီးထွား!
ငွေသား, Inc Features:
•သင်ချင်တယ်နေရာတိုင်းမှာ, အခါတိုင်းထိပုတ်ပါ, တစ်ဦးချိုးယူပါ။ ဤသည်ပျင်းရိ clicker သင်အမှန်တကယ်ရှိဖြစ်ခြင်းမရှိဘဲသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအနေဖြင့်အဘယ်အကျိုးကိုရပေးနိုင်ပါတယ်!
•အမျိုးမျိုးသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန် (သင့်မန်နေဂျာထံမှအဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့) ကိုနှိပ်မှသင်၏ဝင်ငွေရရှိမှုကိုသုံးပါ။
•ပိုက်ဆံ Make နှင့်သင်သင်လိုချင်တာတွေပေါ်တွင်သင်၏ပိုက်ဆံဖြုန်းနိုင်အောင်အမြတ်တက်ပုံ။
•သင့်အနုပညာရှင်စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသင်နှင့်သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဂရုစိုက်နေစဉ်ပျင်းရိ, သေးတန်ဖိုးရှိရှိပျင်းရိသူဌေးကြီးလူနေမှုပုံစံစတဲ့ Lead!
•ကိုယ့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို upgrade နှင့်စီးဆင်းငွေကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကလစ်နှိပ်ပါနှင့်ထိပုတ်ပါ!
•သင့်ကံကောင်းပါစေကစားရန်လာပါစေ - ပို. ပင်သင့်ရဲ့စည်းစိမ်ကိုတည်ဆောက်ရန်ကံဇာတာ၏ဘီးနှင့်အတူလက်မှတ်များ, crystals နှင့်အချိန်ခုန်များကဲ့သို့အထူးအခမဲ့လက်ဆောင်တွေကိုလက်ခံရရှိ! လှည့်ဖျား '' N ကိုဝင်းကသူဌေးက!
•အားလုံးခေတ်ပေါ်တွင်အကျော်ကြားဆုံးပိုက်ဆံသူဌေးကြီး Be သူတို့ကိုနာမည်ကျော်ကြားမှုနဲ့ကံကြမ္မာရောက်ရှိ၌သင်တို့၏အောင်မြင်မှုအကြောင်းပြောဆိုကြကုန်အံ့: သင်၏ကိုယ်ပိုင်တစ်ခုအင်ပါယာ!
•အ Rich List ကိုမှတက်သင့်ရဲ့လမ်းအလုပ်လုပ်! အဆိုပါငွေ, Inc ဦးဆောင်စီးပွားရေးအထက်တန်းလွှာများ၏အသိုင်းအဝိုင်း join ။
သင့်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစွန့်စားမှု Start နှင့်သင်အမြဲလိုချင်တော့ဘဝနေထိုင်ကြသည်။ သင်ရုံတစ်ကလစ်နှိပ်ကာကိုထိပုတ်ပါကွာကျော်ကြားမှုမှအထပ်ထပ်ကြောင့်ချိုမြိန်အတွက်ငွေသား raking ထံမှနေပါပြီ!
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: ငွေ, Inc Playing လုံခြုံတဲ့အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
P.S. ပြဿနာများရှိသလား? မေးခွန်းလွှာ? အကြံပြုချက်များ?
ကျွန်တော်တို့သည်သူဌေးကသင်ကူညီပေးဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ, cashinc@alegrium.com မှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြော & fb.me/cashincthegame အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်း join
Cash, Inc. Money Clicker Game & Business Adventure အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Cash, Inc. Money Clicker Game & Business Adventure အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Cash, Inc. Money Clicker Game & Business Adventure အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Cash, Inc. Money Clicker Game & Business Adventure အား အခ်က္ျပပါ
lmbs62 စတိုး 72 191.07k
Cash, Inc. Money Clicker Game & Business Adventure ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Cash, Inc. Money Clicker Game & Business Adventure အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2.3.5.1.0
App Name: Cash, Inc. Money Clicker Game & Business Adventure
Release date: 2019-08-03 15:10:49
လက်မှတ် SHA1: C6:EF:E0:AD:1E:AA:8C:B7:80:52:54:B8:FF:6F:76:DC:F8:F8:5B:B2
အဖွဲ့အစည်း (O): Alegrium
နယ်မြေ (L): Indonesia
Cash, Inc. Money Clicker Game & Business Adventure APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ